'Akukho Show' Isipho Somshado - Imibono Engcono Kakhulu | Bezzia
Isipho somshado 'akukho abakhona': Imibono engcono kakhulu
USusana godoy | 16/06/2022 16:00 | Umshado
Uma ucabanga ukunikeza isipho somshado 'esingekho show' ngoba ngeke ukwazi ngempela ukuba khona, sizobe sesikushiya nochungechunge lwemibono emihle.. Uma ngokwayo ngezinye izikhathi kubuhlungu bekhanda ukucabanga ngalokho okufanele sikunikeze uma siya emshadweni, ngokuphambene nalokho, kubuye kusilethele izwe lokungabaza. Yebo sikhethe ukukhetha okuphelele.
Konke kuzoncika ekutheni wazi okuningi noma okuncane mayelana nokuthandwa ngabashadikazi. Ngoba kuhlale kuwumqondo omuhle ukudubula indlela enjalo. Kodwa uma kungenzeki kuwe, ungakhathazeki ngoba kunemibono ongakhetha kuyo. Yini okufanele ngimnike uma ngingayi emshadweni? Ungomunye wemibuzo ezwakala kakhulu futhi namuhla uzoba nezimpendulo ezihlukene kuwo.
1 Isipho somshado 'akukho ukuba khona': ibhokisi lesipiliyoni
2 Khokhela ezinye zezinto zakho ezibalulekile
3 Iphakethe eliqondene nawe lamabhodlela
4 Ukumangala kwesidlo sasekuseni ekhaya
5 Imininingwane yokuhlobisa
Isipho somshado 'akukho ukuba khona': ibhokisi lesipiliyoni
Sure usuvele uyazi lawo mabhokisi afana nokulahleka kokuhlangenwe nakho okuyingqayizivele. Ngakolunye uhlangothi kukhona lapho ungakhetha khona ubusuku obubodwa noma obubili, kanye nebhulakufesi noma ibhodi eliyingxenye. Ngaphezu kwalokho, izindawo okuyiwa kuzo zingahlukahluka kakhulu futhi kuleli qophelo kuzoba kubashadikazi ukunquma ukuthi kuphi. Ngokungeziwe kubusuku bamahhotela, kukhona nakho okokuzithokozisa kwe-spa, nokwelashwa okufakiwe noma ikhono lokunambitha uchungechunge lokudla kanye nokuvakasha okunezindikimba eziningi. Kunemibono engapheli, ngakho-ke kufanele ukhethe eyodwa efanelana kancane nokuthandwa komakoti nomkhwenyana. Ukuze wenze ibhalansi mayelana nemali ozoyitshala, cabanga ngesigamu ongayinikeza uma uya emshadweni. Kuwukukunikeza umbono!
Khokhela ezinye zezinto zakho ezibalulekile
Uma ubungane buyiphuzu elivuna wena, uhlale ufuna ukuthi babe nenkumbulo ngawe ngalolo suku olukhethekile. Yingakho ke, ungakhokha ingxenye yezinye zezinto umakoti noma umkhwenyana okufanele azithenge. Ngokwesibonelo, imifelandawonye, ​​isixha noma izinto ezifanayo. Kuyindlela yokutshala imali obuzobanika yona noma mhlawumbe obuzothenga ngayo eminye imininingwane abangayidingi kangako. Nakuba bengase bavumelane nathi, ngokuqinisekile ngokukhuluma ngayo bazokwazi ukuyiqonda.
Iphakethe eliqondene nawe lamabhodlela
Impela lokho ngemva komshado, futhi uma sebefikile bevela ku-honeymoon, bazokumema ekhaya ukuze uzikhumbuze ngosuku olukhulu. Ngakho-ke, akukho lutho olungcono kunokubanika iphakethe lomuntu siqu lewayini noma i-cava. Kukhona nalabo abaletha iziphuzo ezimbalwa futhi vele kungaba imininingwane ephelele. Ngisho nalezi zibuko zingaqoshwa futhi isitika esihle esinesithombe somshado singafakwa emabhodleleni. Namuhla kunamawebhusayithi amaningi anakekelayo. Ngakho ngezinhlelo ezilula ungakwenza ngaphandle kwezinkinga ezinkulu.
Ukumangala kwesidlo sasekuseni ekhaya
Mhlawumbe akusona isipho esinjalo, kodwa kuyisimangaliso esihle. Ngamanye amazwi, uma sikhuluma ngesipho somshado 'sokungafiki', singanikezwa ngezizathu ezihlukahlukene. Kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi asikwazi ukuhamba ngenxa yokunye ukuzibophezela, kokunye okuningi ngenxa yezinkinga zomnotho. Ngakho-ke, umuntu ngamunye kufanele azivumelanise nesabelomali sakhe. Ngakho bamangaze ngokuqasha enye yalezo zidlo zasekuseni eziqondene nawe abazoya nazo ekhaya ngaphandle kokwazi izithandani, kuyisenzo esihle esizobenza bajabule..
Ekugcineni, singase siwele emibonweni yakudala kakhulu, kodwa akufanele siyishiye eceleni ngalokho. Kungakhathaliseki ukuthi uhlobisa ikhaya lakho noma cha, imininingwane yokuhlobisa ingahlala iyindlela enhle. Omunye umdwebo noma iwashi odongeni, kanye nezibani ezincane amatafula aseceleni kombhede. Ama-racks amajazi endaweni yokungena nawo ayindlela ebalulekile futhi vele, amathreyi ukuze bakwazi ukuthatha isidlo sasekuseni sokulala. Yini ojwayele ukuyinikeza uma ungayi emishadweni?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Umshado » Isipho somshado 'akukho abakhona': Imibono engcono kakhulu
Isikhala somuntu siqu ebudlelwaneni bothando
Imibono yokuhlanganisa ifenisha endala neyesimanje